Maxaad Ka Taqaan Qorshaha Loogu Magac Daray “”Somalisation”? |
Inta aynu ku gudo jirno qormadaan waxaan jeclahay inaan si waafiya sharaxaad uga bixiyo waa maxay qorshaha loogu magac daray Somalisation, yaa hindisay ama sameeyey qorshahan, illaa iyo inta uu soo shaacbaxay qorshahan waa kuwee wadama laga hirgaliyay ama lala damacsanyahay in laga dhaqan geliyo? Su’alahaas iyo jawaabahoodaba waxaad ka dhex heli doontaan isla qormadan inta aynu ku gudo jirno.
Macnaha qorshahan la magac baxay Somalisation?
(1) “Somalisation is division of the country amongst the fighting tribes” – waa in dalka loo kala qaybiyo qabiilada ku dagaalamaya ee isku haysta, oo uu qabiilkastana goosta jaan kamid ah dalka isla markaasina ay meesha ka baxdo wax la yiraahdo wadan hebel oo uu noqdo dawlad fashilantay “Failed state”.
(2) “Somalisation would mean control by warlords” – qorshaha Somalisation waxaa kale uu la micno noqon karaa in dalalka uu ka hirgalayo ay maamuulaan hoggaamiyo kooxeedyo hubaysan ama ururo kala aragti duwan oo kooxba ay meel maamusho.
Hadii aynu si guud usheegno macnaha dhabta ah ee Somaliasation waxaa uu noqonayaa in dalkii laga hirgaliyo uusan waligiis yeelan dawlad dhexe oo xoog badan oo hanata hoggaaminta dalkeeda iyo in dalkaas lagu hayo xaalad dhexe oo aan kala yaac iyo qalaalaso toona ahayn isla markaasna aan gaarsiisanayn dawladnimo dhab ah “Nolol iyo Geeri dhexdood”, waa tan hada ka jirta dalka Soomaaliya.
Wadamada uu ka hirgalay ama la qorshaynayo inuu ka hirgalo
Mudooyinkan danbe waxaa saaxafada calaamka lagu baahinayay wadamo la filayo in laga dhaqan galiyo qorshahaan loogu samiyay Somalisation waxaana kamid ah, Suuriya, Iraq, Afghanistan, Libya, Mali iyo Darfur.
Tusaale jariirada la yiraahdo http://www.israelshamir.net/ waxaa ay daabacday maqaal ay cinwaan uga dhigtay Israel waxaa ay qorshaynaysaa in dalka Siiriya ay ka hirgaliso qorshaha Somalisation, “Israel’s Plan for Syria: Somalisation”.
Waxaa kale oo si rasmi ah loogu daray qaamuuska ingiriiska erayga somalisation oo haddii aad ka raadisidna waad ka helaysaa, isagoo waliba sharaxaad dheer ka bixinaya macnaha qorshahan iyo wadamada khatarta ugu jira inuu ka hirgalo iyo waliba kuwa uu ka shaqeyeeyey oo uu ugu horeeyo dalka loogu magac daray ee Soomaaliya.
Wakiilkii gaar ka ahaa ee qaramada midoobay ay u xilsaartay arrimaha dalka Suuriya Ambassador Lakhdar Brahimi oo ka hadlaayay arrimaha Suuriya ayaa isaga oo rajo xumo ka muujinaya xaalada suuriya waxaa uu yiri sidatan “Syria envoy warns of `Somalisation` if peace efforts fail”, waxaa uu Suuraya uga digay haddii dadaalada nabadeed ay fashilmaan in ay suurto gal tahay in dalka Suuriya laga hirgaliyo qorshaha somalisation.
Jariirada caanka ah ee http://journal-neo.org/ ayaa iyana waxaa ay daabacday qormo ay cinwaan uga dhigtay “The Greater Middle East: from nationalism to “Somalisation” mar ay tusaale usoo qaadatay wadanka Ciraaq sida uu qorshahani uga hirgalay waxaa ay tiri “wadanka Ciraaq waxaa uu ukala furfurtay maamul goboleedyo “parade of autonomy” in Iraq, sida maamul goboleedka Faluuja, Basra, Diyala iyo Nineveh. Waxaa iyana gooni ugoosad raadinaya qowmiyada Kurdidada ee degta waqooyiga Ciraaq.
Wadanka Liibiya ee hodonka ku ah saliida ay isna qarka uu saaran inuu ka hirgalo qorshahaan loogu laqimay somalisation, kadib marki ay meesha ka baxday dawladii dhexe ee Liibiya oo uu hormuudka ka ahaan jiray kaligi taliyihii dhintay ee Qadafi, waxaana dalka Liibiya ka kala taliya urrur diimeedyo,qabaa,ilo hubaysan iyo dawlad tabar daran balse calaamku aqoon san yahay.
Waxaa qorshahan dabada ka riixaya oo hirgalinaya wadamada reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan midowgaYurub iyo wadanka Maraykanka isla markaasna ay bari taarayaan wadamada Israel iyo dawlada Ruushka, oo iyagu usoo tafaxaytay inay boobaan isla markaasna ay maamuulan wadamadaan uu ka hirgalay somalisationku.
Waxaa iyana xusid mudan oo habboon in la sheego qorshahan loogu magac daray somalisaton-ku in dhammaan wadamada uu ka hirgalay ama laga hirgalin doona ay yihiin wadamo Islaam ah oo uu Illaahay ku manaystay khayraadka dabiciiga ah “Natural resources” sida Saliida cayriin iyo macdanta.
Qorshaha Somalisation waxaa kale oo uu muujinaya sidda looga takhalusay wadanka Soomaaliya maadamaa magaceedii laga dhigay qorshe lagu dumiyo wadamo dhisan isla markaasna noqday istaraatiijiyad loo maro wadankii la rabo in hadba markaas laga saaro khariirada calaamka.
Somalisation waxaa uu qayb ka yahay fool xumaynta la fool xumeeyey magacii Soomaaliya oo isagu tusaale u noqday wax walba oo xun sida, Argagixiso, burcad badeed, iyo dawlad la,aan.
Waxaan kusoo afmeeray qormadan maahmaahdii ahayd “Siday u ilxun tahay umma Alla xuma” oo aan uga gol leeyahay hagaardoomiynka loo gaystay ummada Soomaaliyeed iyo dalkoodaba haddii ay iyagu ka gilgishaan isla markaasna ka dhiidhinaya guntigana dhiisha uga xirtaan siddaa ay kusoo ceshaan lahaayeen sharaftoodi luntay in ay soo ceshan karaan iyaga oo Alle tala saaranaya lana imaaya dadaal iyo juhdi iyo dheer.
Soomaliya Guul, Soomaliya Midnimo iyo Israac
Tags: Maxaad Ka Taqaan Qorshaha Loogu Magac Daray “”Somalisation”?
Next post Dhismaha Cudud Ciidan Waa Quwada Qarankeena!
Previous post Dareen Qabiil iyo Dawlad Qaran La Isku Waa !!!